နေအိမ် » တိုက်ပွဲတွေ » Adventure Time Legend Sword
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Adventure Time Legend Sword
ကစား: 31,064 tag ကို: စွန့်စားချိန်, စွန့်စားမှုအချိန်ဂိမ်း, ဖင်လန်, ဖင်လန်ဂိမ်း, Jake, Jake ဂိမ်း
စွန့်စားမှုအချိန် warterfall ခုန်
ဤသည်စွန့်စားမှုအချိန်ဂိမ်းစီးရီးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းထဲမှာ, ဖင်လန်နှင့် Jake ရေတံခွန်အပေါ်ခုန်ဖို့ရှိသည်။ သူတို့ကိုသင့်ရဲ့ mouse ကို click နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျောက်တို့အပေါ်မှာခုန်အားဖြင့်ဒီမစ်ရှင်ပြီးစီးခြင်းကိုကူညီပါ။
ဒီဂိမ်းထဲမှာ, ဖင်လန်နှင့် Jake သူတို့ကိုလမ်းအပေါင်းတို့၌မိကျောင်းကိုသတ်နဲ့သူတို့ရဲ့မစ်ရှင်ပြီးအောင်ကူညီဟယ်လိုညဉ့်အခါတစ်ဦးစွန့်စားမှုရှိသည်။ ကံကောင်းပါစေ!
ဖင်လန်တတ်နိုင်သမျှအကြိမ်ပေါင်းများစွာများအတွက်ကြိုးပေါ်ခုန်ကူညီပါ။ play ရန်သင့် mouse ကိုသုံးပါ
ဤသည်စွန့်စားမှုအချိန်စီးရီးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒီဂိမ်းထဲမှာ, ဖင်လန်နတ်ဆိုး၏ပွညျ၌ပျောက်ဆုံး, သူ့ကိုတစ်လမ်းထွက်ကိုကူညီရှာဖွေပေမယ်ရဲ့လမ်းတလျှောက်မိကျောင်းအာရုံစိုက်ပါ, ကျနော်တို့ဖင်လန်တိုက်ခိုက်လိမ့်မည်။
ဖင်လန်ပျော်ရွှင်တဲ့ပွညျ၌ Jake စွန့်စားမှု, သူတို့ကို way.Flinn အတွက် obsters နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပြေးပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်ရန်ကိုရှောင်ရှားကိုကူညီပေးပါတယ်။ Flinn မိကျောင်းများ၏အန္တရာယ်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသောအတားအဆီးကိုကျော်လွှားဖို့အပြေးပြိုင်ပွဲ၌။ Flinn အဖြစ်အသွင်ပြောင်းခြင်းကိုခံရ
စွန့်စားမှုအချိန်: mars ၏သား
ဖင်လန်အများအပြားထူးဆန်းတဲ့သတ္တဝါတွေနဲ့အန္တရာယ်များရှိပါတယ်ဘယ်မှာအင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင်တစ်ဦး Adventures ရှိသည်, တိုက်ခိုက်ကြောင်းဖင်လန်သတ္တဝါတွေကိုကူညီနဲ့ဒီဂိမ်းအားလုံးအဆင့်ဆင့်ကိုဖြည့်ပေးပါ။
တော်ဝင် Ruckus တော်ဝင် Ruckus အတွက် Marceline နှင့် Lumpy အာကာသမင်းသမီးနှင့်အတူထောင်ထဲမုန်တိုင်း! သူတို့ရဲ့မင်းသမီးနေ့ hijinks ပြီးနောက်, လိင်နှင့် LSP ပိုပြီးဒုက္ခကိုရှာဖွေနေသွားလေ၏။ အ Crystal မျက်လုံးခြင်း, ရေညှိခင့်နိုင်ငံတော်တွင်းတစ်ခု၏ထောင်ထဲအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်း Make
ဖင်လန်ထူးဆန်းတဲ့မြို့, ဘယ်မှာမိကျောင်းနှင့်အတားအဆီးများရှာဖွေတွေ့ရှိ။ သူတို့အားလုံးကိုရန်သူများကိုဖျက်ဆီးပြီးဂိမ်းအားလုံးအဆင့်ဆင့်ကိုကျော်လွှားရန်အထူးကျွမ်းကျင်မှုကိုအသုံးပွုဖို့ကိုကူညီပေးပါ။
ငါ၏အ Glob, သငျသညျယောက်ျားတွေစေသော Lumpy အာကာသမင်းသားသည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းရှိပါတယ်။ အဲဒီအဖုအတွက်မီးမောင်းထိုးခိုးယူဖို့အခြားပါတီဧည့်သည်များသို့ဝင်တိုး။ Fionna, ကိတ်မုန့်, ​​မာရှယ် Lee က, Flame ဟာမင်းသားနှင့်ထို့ထက် ပို. ဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့ဖုချွတ်ကခုန်တတ်! သငျသညျအပူဆုံးဖုများသက်သေပြဖို့။
မင်းသမီး Bubblegum တစ်တော်ဝင်ကား Bash ပစ်နေပါသည်! သို့သော်ဤမယ့်မည်သည့်ပါတီမျှမက, ထိုသို့စွန့်စားမှုအချိန်တိုက်ပွဲပါတီပဲ! လွန်မိပြီ 3-အပေါ်-3 တိုက်ပွဲများဘို့မိတ်ဆွေများနှင့်အတူတက်ရှိနေသေးသည်ပြီးတော့, သင့်ချန်ပီယံကိုရွေးချယ်ပါ။ တူ, သင့်အကြိုက်ဆုံးစွန့်စားမှုအချိန်သူရဲကောင်းများနှင့်လူကြမ်းအဖြစ်အဖြစ် Fight
2 finned စွန့်စားမှုအချိန်မျက်စိကန်းသော
ဖင်လန်မျက်စိကန်း၏! သူနှင့် Jake နောက်တဖန်ဆိုးသောအနေဖြင့် Candy ခင့်နိုင်ငံတော်ကိုကယ်တင်ရမယ်သစ္စာရှိမိတ်ဆွေအဖော်။ သာမောက်စ်နှင့်အတူ controls ။ , Hilary လှည့်ကွက်လုပ်ဆောင်အဖြစ်အစာရှောင်သင်တတ်နိုင်သလောက်ပြေးသင်သည်သင်၏လမ်းအပေါ်ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်သမျှသောအတားအဆီးကိုကျော်လွှား။
ဒီဂိမ်းထဲမှာ, ဖင်လန်နှင့် Jake မှာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သစ်တောအပြည့်အဝစိန်အတွက်စွန့်စားမှု join ။ ဖင်လန်လူအပေါင်းတို့သည်စိန်ပွင့်များကိုစုဆောင်းနှင့်ဂိမ်းအားလုံးအဆင့်ဆင့်လွန်ကိုကူညီပေးပါ။
အဘယ်သူသည်ဗီဒီယိုဂိမ်းစေလိုသည် ?! အဆိုပါစွန့်စားမှုအချိန်ဂိမ်းဖန်ဆင်းရှင်သင်ဖင်လန်နှင့် Jake featuring algebra စွန့်စားမှုအချိန်ဂိမ်းတည်ဆောက်ဖွင့်ပါစေ တစ်ခုချင်းစီကိုဇာတ်ကောင်အထူးတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ သင်၏မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်အခြား PLA ကတည်ဆောက်ကစားဂိမ်းနှင့်သင်၏ဂိမ်း Share
ဖင်လန် lemonade ၏နိုင်ငံမြို့သားလှတျမွောကျဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အားလုံးစိန်ခေါ်မှုများပလက်ဖောင်းအကြားခုန်နှငျ့သငျနိုငျငံတျောသညျမြို့သားအပေါင်းတို့ကိုလှတျမွောကျစ espalhados ဖြစ်ကြ၏သံပုရာဖမ်းကျော်လွှား။
ဖင်လန်နှင့် Jake ဒီဂိမ်းထဲမှာအားလုံးအဆင့်ဆင့်အပြီးသတ်ကူညီပါ။
ဤသည်စွန့်စားမှုအချိန်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖင်လန်စိန်ပွင့်များကိုစုဆောင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိဓါးသွားကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ကိုကူညီပါ။ play ဖို့ Up ကိုနှင့် Down ခလုတ်များကိုအသုံးပြုပါ။
ခရစ္စမတ်ညတွင်ဂျက်ဆုကြေးဇူးကိုသေတ္တာဖမ်းပေမယ့်အနက်ရောင်ဆုလက်ဆောင်သေတ္တာဖမ်းဘူးကိုကူညီပေးပါတယ်။ play ရန်သင့် mouse ကိုသုံးပါ
ဤသည်စွန့်စားမှုအချိန်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ပြန်ဖို့လမ်း, တစ္ဆေ Chase ဖင်လန်နှင့် Jake ရှင်ဘုရင်တွင်, ဖင်လန်နှင့် Jake သင်သည်အလျင်အမြန်တစ္ဆေမှလွတ်မြောက်ရန် run ကိုကူညီပေးပါတယ်။ အဖြစ်ဝေးသင်ပိုမိုအချက်များအရအဖြစ်ကို run, ခုန်ဖို့ space bar ကိုသုံးပါ။
ဤအချိန်အထိ Jake နှင့်ဖင်လန်ဘာတွေလဲ? တစ်သက်တာ၏စွန့်စားမှုအဘို့ပြင်ဆင်ပါ!
စွန့်စားမှုအချိန် Games- အသုံးပြုမှု Jake ဆွဲဆန် ့. အင်အားကြီးနတ်ဆိုးများမှသူ့မိတ်ဆွေလွတ်မြောက်ရန်။